व्यवस्थापन – Page2– Himalaya Television
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले बनायो गौशाला (भिडियोसहित)
११ कात्तिक, २०७७, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि वडा नम्बर ९ मा पर्ने वृन्दावन समुदायिक वनमा गौशाला निर्माण गरेको छ । करिब ४० बिगाहामा नगरपालिकाले ४० लाख खर्च गरेर बनाएको गौशालामा २ सय...
सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा भन्दा हारेकाको व्यवस्थापनमा केन्द्रितः डा. भट्टराई
१७ असोज, २०७७ काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणभन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताहरुको समस्या समाधानभन्दा सरकार र सत्तारुढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिहरुको...
अब स्थानीय तहलाई आइसोलेसन व्यवस्थापनको जिम्मा
४ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले आइसोलेसन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अस्पतालमा लक्षण भएका कोरोना संक्रमितलाई मात्र राखिनेछ । लक्षण नभएकालाई संस्थागत वा होम आइसोलेसनमा राख्ने भन्दै सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको हो ।...
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन, कार्यविधि एकातिर व्यवहार अर्कातिर (भिडियोसहित)
२३ भदौ, २०७७, काठमाडौं । हाम्रो समाजमा मृत्युसंस्कार धार्मिक आस्था र परम्परासँग जोडिएको छ । मृत्यु संस्कारलाई महत्वपूर्ण मानिने भएपनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको आफन्तहरुले भने आफ्नो आफन्तको मृत्यु संस्कार गर्न पाएका छैनन् । कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनको कार्यविधि...
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेकोमा सत्तारुढ सांसदहरुकै आपत्ति
२५ जेठ, २०७७ काठमाडौं । सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुनेकपाका मुख्य सचेत खिमलाल भट्टराईले क्वारेन्टिन हिरासत जस्तो भन्दै सुधारमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले...